मुद्दाको छिनोफानो गोलाप्रथाबाट ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मुद्दाको छिनोफानो गोलाप्रथाबाट !
२०७१ बैशाख १, सोमबार ०३:२६ गते
भरतपुर । एकजना मात्र न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा सवै किसिमका (देवानी र फौजदारी) मुद्दाको छिनोफानो सम्बन्धित न्यायाधीशले नै गर्छन् । तर, २ वा २ भन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा मुद्दाको बाँडफाँड के कसरी होला र कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्लान् भन्ने आम मानिसको जिज्ञासा रहेको पाइन्छ ।
सर्वोच्च आदलतबाट जारी जिल्ला अदालत प्रयोगकर्ताको वडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार २ वा २ भन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा मुद्दा बाँडफाँड गोला प्रथाबाट हुने गरेको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले ३ जना न्यायाधीश छन् । ती मध्ये वरिष्ठ न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्य जिल्ला न्यायाधीश हुन् । अन्य दुई न्यायाधीशहरु हिमलाल बेल्वासे र अनन्तराज डुम्रे हुन् । उनीहरु दुवैजना अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश हुन् ।
तीन जना न्यायाधीशका लागि मुद्दाको प्रकृतिअनुसार हरेक महिनाको सुरूवातमै संख्या बराबर हुने गरी गोलाप्रथा गरिन्छ । विशेष गरी एउटै प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको ठाउँमा मुद्दा दर्ता भएपछि गोला हाली मुद्दा तोकिन्छ । चितवन जिल्ला अदालतमा पनि महिनाभरीको मुद्दा जम्मा गरी गोलाप्रथाबाट टुङगो लगाउने गरिएको अदालतका नायव सुब्बा जयनारायण आचार्यले बताए ।
जिल्ला अदालत प्रयोगकर्ताको वडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित न्यायाधीशलाई परेको मुद्दाको बाँकी कारबाही र किनारा सोही न्यायाधीशको इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । तर लगाउको मुद्दाको हकमा मूल मुद्दा रहेको इजलासबाट सवै मुद्दा हेर्ने गरी तोकिन्छ ।
फौजदारी मध्येमा पनि देवानीमा लगाउ भएका बाहेकका फौजदारी एक नम्बर इजलासले हेर्छ भने शुद्ध देवानी प्रकृतिका र देवानीसँग लगाउ भइ आएका फौजदारी मुद्दा २ वा ३ नम्बर इजलासले हेर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दा एक नम्बर इजलासले हेर्छ भने निशेधाज्ञा २ र ३ ले गोलाप्रथाबाट हेर्ने गर्छन् ।
देवानी र फौजदारी हेर्ने छुटाछुटै न्यायाधीश तोकिन्छन् । जुन न्यायाधीशलाई जस्तो मुद्दा हेर्न तोकिएको छ निजले सोही मुद्दा मात्र हेर्दछन् । कार्यबोझमा असमनता देखिएमा अर्को इजलासलाई तोक्न पनि सकिन्छ ।
कुनै न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा निजले गर्नुपर्ने बयान, बकपत्र, थुनछेक, मिलापत्र, रोक्का फुकुवाजस्ता काम उपस्थित अर्को न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । सात दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेमा सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्ने मुद्दा अर्को न्यायाधीशले फैसलासमेत गर्दछन् ।